01 | January | 2008 | Moep1's Blog
(နေပြည်တော် ၊ ၁ ဇန်န၀ါရီ ၊ ၂၀၀၈)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းသည် ဒုတိယ ၀န်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်၊ ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဟုတ်ကြည်တို့ လိုက်ပါ၍ ဒီဇင်ဘာ(၂၅)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပဲခူးတိုင်း၊ တောင်ငူမြို့နယ်၏ အနောက်ဘက် (၁၂)မိုင်ခန့်အကွာ ခပေါင်းချောင်းပေါ်တွင် တည်ဆောက် အကောင်အထည်ဖော်လျှက်ရှိသော “ခပေါင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း”သို့ ရောက်ရှိသည်။
ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များအပေါ် ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းက လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေး မှာကြားသည်။ ယင်းနောက် ၀န်ကြီးနှင့် အဖွဲ့သည် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံအတွင်း စက်ပစ္စည်းများ တပ်ဆင်နေမှု၊ စက်ပစ္စည်းများ ရောက်ရှိမှု၊ဗို့ (၄၀၀)ဓါတ်အားစစ်ဆေးခန်း၊ ဗို့ (၁၁၀၀၀)ဓါတ်အား ထိန်းချုပ်ခန်း၊ ဓါတ်အားပို့လွှတ်မည့် မြေအောက် Cable ကြိုးများ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို လှည့်လည် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
ဆက်လက်၍ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းသည် Switchyard တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုနှင့် ကြွေသီးများ တပ်ဆင်ပြီးစီးမှု အခြေအနေ၊ ဖိအားမြှင့် သံမဏိပိုက်လိုင်း ကွန်ကရစ် လောင်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှု၊ စက်ရုံ ရေထုတ်မြောင်းနှင့် ခပေါင်းချောင်း တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းတို့အား သွားရောက် ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
ယင်းနောက် ၀န်ကြီးသည် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးအောင် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရေး၊ စက်များတပ်ဆင်ရာတွင် အပိုင်းလိုက် မှန်ကန်အောင် စနစ်တကျ တပ်ဆင်ရေး၊ စက်ရုံနှင့် စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ရေး၊ စက်ရုံနှင့် စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်တွင် အရိပ်ရပင်များ၊ နှစ်တို နှစ်ရှည် စားသုံးပင်များ စိုက်ပျိုးရေး၊ သဘာဝ အလှအပနှင့် သစ်တော သစ်ပင် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး၊ မီးဘေး အန္တရာယ် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတို့ကို အသေးစိတ် ဆွေးနွေး မှာကြားခဲ့သည်။
ခပေါင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် ယခုအခါ(၉၀%)ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ စီမံကိန်းပြီးစီးပါက စက်တပ်ဆင်အင်အား (၃၀)မဂ္ဂါဝပ်မှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း (၁၂၀)ခန့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးမည့် စီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
Comments Off on ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း ခပေါင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း သို့ ရောက်ရှိ	| ခပေါင်း (Khaboung)	| Permalink
Minister on inspection tour of Khabaung Hydropower Project
(NAY PYI TAW, 1 Jan, 2008)
Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min, accompanied by Deputy Minister U Myo Myint and Director-General U Hoke Kyi of Hydropower Administration Department, went on an inspection tour of Khabaung Hydropower Project in Toungoo Township yesterday.
At the briefing hall, Project Director U Maw Tha Htwe and Mechanical and Electrical Installation Director U Khin Maung Win presented reports to the minister on the project tasks and Deputy Minister U Myo Myint gaveasupplementary report.
After hearing the reports, the minister gave instructions on requirements of the project and inspected progress in building the power plant, installation of machines at the plant and stockpile of machinery.
The minister looked into power control rooms and laying of underground cables, progress in building the switchyard, installation of porcelain balls, placing of concrete on steel pipelines, digging outlet canal of the power plant and dreding of Khabaung creek.
The minister called for making efforts to complete the project tasks in time, carry out the tasks for proper flow in Khabaung creek, correctly install machinery at the power plant, perform greening tasks for the plant and its environs, grow shade trees and other crops, conserve natural beauties and forests and take preventive measures against the fire.
Ninety per cent of Khabaung Hydropower Project has completed. Upon completion, the 30-megawatt installed power plant will generate average 120 million kwh yearly.
Comments Off on Minister on inspection tour of Khabaung Hydropower Project	| ခပေါင်း (Khaboung)	| Permalink
တီကျစ် ကျောက်မီးသွေးသုံး ရေနွေးငွေ့ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းသည် ရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်သာနှင့် တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်ရှိ တီကျစ် ကျောက်မီးသွေးသုံး ရေနွေးငွေ့ ဓါတ်အားပေး စက်ရုံသို့ ဒီဇင်ဘာလ (၂၀)ရက်နေ့ မွန်လွဲပိုင်းတွင် ရောက်ရှိသည်။
ရှေးဦးစွာ စက်ရုံရှိ ရှင်းလင်းဆောင်တွင် စက်ရုံမှူးနှင့် စက်ရုံတွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် နေသော အင်ဂျင်နီယာများ၊ ၀န်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံရာ၌ ၀န်ကြီးအား စက်ရုံမှူး ဦးကျော်ထွေးက အမှတ် (၁) နှင့် အမှတ်(၂)ဓါတ်အားပေးစက် (၂)လုံး မောင်းနှင်၍ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေ၊ ဓါတ်အားပေးစက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များ၊ စက်ရုံ၏ နှစ်အလိုက် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကျောက်မီးသွေး သုံးစွဲမှု၊ ကလေးဝ ကျောက်မီးသွေးဖြင့် စမ်းသပ် ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှု၊ ကလေးဝ ကျောက်မီးသွေးနှင့် တီကျစ်ကျောက်မီးသွေးတို့ကိုရောစပ်၍ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်မှု အခြေ အနေတို့ကိုလည်းကောင်း၊ ၂၀၀၇-၀၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျောက်မီးသွေးလိုအပ်ချက်၊ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ရန် လျာထားချက်တို့ကို “ဗွီဒီယို ဆလိုက်” များဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ရေအားလျှပ်စစ် ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်သာနှင့် အင်ဂျင်နီယာမှူးကြီး ဦးခင်မောင်ဦးတို့က ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းတင်ပြကြသည်။
ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များအပေါ် ၀န်ကြီးက ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရန် လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေး မှာကြားပြီးနောက် လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍ ၀န်ကြီးက အင်ဂျင်နီယာများနှင့် ၀န်ထမ်းများအား အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားပေးစက်ရုံများမှ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ပေးမှု အခြေအနေကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက် ၀န်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား ထက်မြက်သော ၀န်ထမ်းများဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်း လုပ်ကိုင်ကြရန်၊ ဤစက်ရုံတွင် ဓါတ်အားအပြည့်အ၀ ထုတ်လုပ် နိုင်ရေးအတွက် မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ကြရန်၊ စက်ရုံမှူးနှင့် အင်ဂျင်နီယာများက ရာထူးအလိုက် အဆင့်ဆင့် ကြပ်မတ်ပြီး စက်ရုံလုပ်ငန်းခွင်တွင် လေ့ကျင့်ပညာပေးကြရန်၊ စက်ရုံသို့ ရောက်ရှိလာသော ကျောက်မီးသွေးများကို စံချိန်စံညွှန်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း၍ စစ်ဆေးကြပ်မတ် လက်ခံကြရန်၊ ကလေးဝ ကျောက်မီးသွေးမိုင်းမှ သယ်ယူလာသော ကျောက်မီးသွေးများကို အလေအလွင့် နည်းပါးအောင် ကြပ်မတ်သယ်ယူကြရန်၊ စက်ယန္တရားများကို စနစ်တကျ ကိုင်တွယ်မောင်းနှင်၍ နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ် ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ငန်းများ ပုံမှန်ပြုလုပ်ကြရန်၊ စက်ရုံနှင့် စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းသာယာလှပရေး သစ်တောသစ်ပင်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မပျက်စီးအောင် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရေး၊ ၀န်ထမ်းနှင့် ၀န်ထမ်းမိသားစု ကျန်းမာရေးနှင့် ပညာရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးမှာကြားသည်။
၎င်းနောက် ၀န်ကြီးသည် တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ကျောက်မီးသွေး အရည်အသွေးစမ်းသပ် ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ ရောက်ရှိရာ ၀န်ကြီးအား ဌာနမှူး၊ လက်ထောက် အင်ဂျင်နီယာ ဦးအေးမင်းက ကျောက်မီးသွေး၏ အဓိက အရည်အသွေးများ စစ်ဆေးစမ်းသပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ၀န်ကြီးက လိုအပ်ချက် ဆောင်ရွက်ရန်များကို မှာကြားပြီးနောက် ဓါတ်ခွဲခန်းအတွင်း လှည့်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
၎င်းနောက် ၀န်ကြီးသည် စက်ရုံရှိ ဘွိုင်လာတွင် အသုံးပြုသော ရေများကို သန့်စင်သည့် ရေသန့်စက်ရုံသို့ လည်းကောင်း၊ စက်ရုံပိုင် ရာသီ သီးနှံစိုက်ခင်း (၄)ဧကတွင် ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ဂေါ်ဖီစိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းနေမှု အခြေအနေကိုလည်းကောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။ ၎င်းနောက် ၀န်ကြီးသည် စက်ရုံမှ တာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါ၍ ဓါတ်အားထိန်းချုပ်ခန်းသို့ ရောက်ရှိပြီး ဓါတ်အားထိန်းချုပ်ခန်းတွင် ကွန်ပျူတာများ အသုံးပြု၍ ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ပို့လွှတ်မှု လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုကိုလည်းကောင်း၊ အမှတ်(၁)နှင့် အမှတ်(၂)တာဘိုင်စက်၊ ဘွိုင်လာများ မောင်းနှင် နေမှုနှင့်ဘွိုင်လာတွင် ကျောက်မီးသွေး အသုံးပြုနေမှုကိုလည်းကောင်း အသေးစိတ် လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ဆက်လက်၍ ၀န်ကြီးသည် ကျောက်မီးသွေး သိုလှောင်ရုံတွင် ကျောက်မီးသွေး စုဆောင်းထားရှိမှုကို ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။ ထိုမှတဆင့် ၀န်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် ရှမ်းရိုးမနဂါး ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ ကျောက်မီးသွေး ထုတ်လုပ်လျှက်ရှိသော ရှမ်းရိုးမနဂါး ကျောက်မီးသွေးမိုင်းရှိ ရှုရပ်သို့ ရောက်ရှိရာ ၀န်ကြီးအား ရှမ်းရိုးမနဂါး ကုမ္ပဏီမှ အင်ဂျင်နီယာချုပ် ဦးလှိုင်ဝင်းအောင်က ကျောက်မီးသွေးတူးဖော်ရရှိမှု အခြေအနေ၊ ကျောက်မီးသွေးများ သန့်စင်ပုံ နည်းစနစ်၊ တူးဖော်ရရှိသည့် ကျောက်မီးသွေးများ၏ အရည်အသွေး၊ စက်ရုံသို့ ကျောက်မီးသွေး ပေးပို့နိုင်မှု အခြေအနေနှင့် ရှုရပ်မှ တွေ့မြင်နေရသည့် ကျောက်မီးသွေးမိုင်း အပေါ်ယံမြေလွှာ တူးဖော်ရှင်းလင်းခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပေါ်ထွက်လာသည့် ကျောက်မီးသွေးများအား တူးဖော်မှုတို့ကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ၀န်ကြီးက ကျောက်မီးသွေး၏ အရည်အသွေးနှင့် လိုအပ်မှု ပမာဏကို ဆွေးနွေးမှာကြားပြီးနောက် ကျောက်မီးသွေးများကို တစ်ရက်လျှင် တန်(၂၀၀၀)ကျ တူးဖော်သယ်ပို့မှုလုပ်ငန်း၊ အပေါ်ယံမြေလွှာများ ဖယ်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အပေါ်ယံမြေလွှာများကို Conveyor Belt စက်များအသုံးပြု၍ စွန့်ပစ် စုပုံကွင်းသို့ ပေးပို့ပြီး ဖြန့်ခင်းနေမှုလုပ်ငန်းနှင့် ကုမ္ပဏီရှိ ယန္တရားဝင်းအတွင်း လုပ်ငန်းသုံးမော်တော်ယာဉ်များကို ၀င်ရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး တာဝန်ရှိသူများ၏ တင်ပြချက်များအပေါ် ဖြည့်ဆည်းစီမံဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Comments Off on တီကျစ် ကျောက်မီးသွေးသုံး ရေနွေးငွေ့ ဓါတ်အားပေးစက်ရုံအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| တီကျစ် (Tigyit)	| Permalink
You are currently browsing the Moep1's Blog blog archives for the day Tuesday, January 1st, 2008.